Cuncunku waa sunta jirka. - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • Caadooyinka wanaagsan • DARYEELKA CAAFIMAAD • daryeelka Cuncunku waa sunta jirka.
Cuncunku waa sunta jirka.
Eliseo Emma Kamgang 12 March 2019
TagesAnnagu dhashey oo mar hore naga xanaaqay. Thea cabsi iyo xanuunsidoo kale. Dareenadaas waxay ku imaanayaan adduun kasta iyada oo qof kasta, iyada oo aan loo eegin duruufaha qofkasta uu ku dhashay. Laga soo bilaabo dhalashada, mid kasta oo ka mid ah xaqiiqooyinka shakhsi ahaaneed ayaa la mideeyaa waxaana la qaadan doonaa koorsada jawiga jawiga ah.
Cuncun wuxuu leeyahay heerar kala duwan. Waxay ka kala duwan yihiin hiddo-wadaha ama caro-gelinta wax kasta oo xanaaqa ah ee kufsiga ee indho-la'aanta ah ee keenaya falalka ugu waxyeellada badan ee aadanaha. Tani waa, dhab ahaan, mid ka mid ah dareenka ka si ka badan sidii aan dareemeyn karno. Mid ka mid ah kuwa ugu waxyeelada badan. Haddii uu jabo ama la cadaadiyo, waxay ku dhamaaneysaa inaan naga dhigo xanuunsan.
Sidaa darteed bini'aadamku waxa ay la kulmayaan isbedel wayn. Wuxuu dareemaa caro, wax kasta oo dhaca. Maaha suurtagal in la gooyo qaybtan lafteeda. Waa inuu waliba bartaa sida loo maareeyo, khatarta ah inuu jirrado, jidhka iyo maskaxda. Warka wanaagsani waa in ay suurtagal tahay. Waxaa macquul ah in loola jeedo cadho cad. Si aad u tartanto, si aad u qaadato, qaadashada halista ayaa ah dhammaan siyaabaha loo sameeyo. Laakiin haddii aynaan ku guuleysan, jidhku naftiisa ayaa bixin doona cawaaqibka.
Cadaadis ayaa kaa dhigeysa inaad jiran tahay
Dawooyinka dabiiciga ah iyo kuwa caadiga ahba waxay ku adkaysanayaan in dhammaan cudurada ay leeyihiin qaybaha dareenka. Laga soo bilaabo barta aragtida hababka Dhammaan jirrooyinka, cudur kasta waa dareen aan la xalin. Marka dareenkaasi uu gaaro heerkiisa ugu sarreeya, waxa uu awood u leeyahay in uu sii xumaado caafimaadka iyo xitaa dhimashada.
Aragtiyadani waxay muujinayaan in dareen kasta uu saameyn ku yeelan karo qeyb ka mid ah jirka. Xaaladda xanaaqa, waxaa la ogyahay in ay saameyn ku yeeshay guud ahaan qeybta jirka iyo caloosha.
Carabtu waxay qaadataa noocyo badan. Dib u noqoshada, rancor, nacayb, iwm. Dhammaan foomamkaas waxay ku dhamaanayaan inay yeeshaan cillad caafimaad. Runtii, waat bangiyada waqtiga dhabta ah ee ku soo baxa qaabka loo yaqaan gallstones, dhibaatooyinka gallbladder iyo xanuunada dheefshiidka ee kala duwan.
Saamaynta kala duwan ee jirka
Cilmi baarayaasha Machadka Qaranka ee Aging ayaa leh dhawaan ayaa la sameeyay baaritaan lagu sameeyay saameynta cadhada jidhka. Natiijooyinka daraasadda ayaa lagu daabacay Wargeyska Ururka Maqalka Americanka. Waxaa la xaqiijiyay in dadka weli sii xanaaqaya waxay u muuqdaan inay muujiyaan raadinta dareenkaas ee jirkooda.
Waxaa la ogaadey in kuwa xanaaqa badanaa ay u muuqdaan kuwo aan caadi ahayn oo ku jira halbowleyaasha carotid. Tani, dabcan, waxay kordhisaa khatarta ah istaroog. Si la mid ah, waxaa la ogaaday in kuwa leh "dabiici ah" nooc dabeecad ah, taas oo ah in la yidhaahdo mid aad u kacsan, guud ahaan wuxuu leeyahay dhererka derbiyada arterial.
Intaa waxaa dheer, Cunto kasta oo xad-dhaaf ah waxay keenaysaa koror muuqda oo soo saaridda hoormoonada qaarkood. Waxaa ka mid ah, adrenaline. Kordhinta walaxdan waxay keenaysaa isbeddel ku yimaada dheelitirka aaladda waxayna ugu dambayntii horseedi kartaa weerarada wadnaha ama xanuunka maskaxda.
Midna kuma jiraan waxna ha xakameynin
Waxaan heysanaa sababo badan maalin kasta si ay u xanaaqaan, wax kasta oo daneynaya. Waxba ma shaqeeyo si fiican, iyo iskahorimaadka iyo xanaaqa waxay xakameysaa maalmahayaga. Si loola tacaalo dareemada diidmada iyo xanaaqa, waxa ugu horeeya waa in la ogaado in aan xanaaqsanahay. Xaqiiqadan fudud waxay horay u sii kordhinaysaa suurtagalnimada in si caqli-gal ah loo raadiyo tamarta qofka.
Sida aan hore u soo sheegnay, dareenkaasi wuxuu leeyahay dhinacyo kala duwan. Waxaa jira asaas ahaan afar :
Cadhad aan la kontoroolin
Cadho "fara badan" ama laga wareejiyo qof kale
Dareeso si aad u daboosho dareen kale oo miyir qabo, in qofku aanu si macquul ah u aqbalin
Cadhada ka timaadda la'aanta is-sheegid la'aan
Nidaamka xanaaqa wuxuu inta badan ka yimaadaa afar ilo: cabsi, niyadjab, shaki iyo dambi. Cadhadku ma xallin karo cabsida ama niyadjabka ama shaki ama dembi. Waxay kaliya bixisaa bixid khatar ah. Waxay soo saartaa dareen ah in la sii daayo, laakiin ma tirtirayso sababaha dhibaatada. Waxa kale oo ay soo bandhigaysaa xaalad sii xumaaneysa oo ay nafteeda u bixiso. Inta badan waxaan dareemeynaa xanaaq, waxa ay u badan tahay inaanu xakamayno, markaa way sii xoogaysaneysaa. Taasi waa sida ay u shaqeyso.
Xalku ma aha in la dhibaateeyo ama sii daayo iyada oo aan la xakameynin. Waddadu waa in la aqbalo in aan dareemo caro, si aan u muujinno damiirka. Waxay bilowdaa inay isdifaacto. Waxay qaadanaysaa kaliya sanadaha 10 si ay u sameeyaan layligan. Markaas waa lagama maarmaan in la isku dayo in la ogaado waxa ay tahay ilaha dhabta ah ee xanaaqa. Tani waxay ina siinaysaa talooyin ku saabsan sida loo xaliyo dhibaatada ka dambeysa.
Anne Marivin / "Haragga hoostiisa": "Dabeecaddayda waxay la dagaallantaa kansarka sida ugu badan ee denbi"
Tan iyo markii 1991, Montcornet, waxaanu caawinnaa bukaanka kansarka